Soft unodzivirira kutungamirira jasi maoko refu uye refu maoko - China Shandong Chen lu
Soft unodzivirira kutungamirira jasi maoko refu uye refu dzisimbe
Zvinonzi kubva dzinongoitika rabha, yellow danfen uye kupatsanurwa ne kugadzira.
Lead nerokuti: 0.25 MMPB, 0.35 MMPB, 0.5mmpb, kana yakasiyana dziviriro yakaenzana zvichienderana chaiwo ezvinhu. Ainyanya kushandiswa X-ray kudzivirirwa, vanokwanisa kusarudza nokurondedzerwa siyana yokudzivirira akatevedzana zvigadzirwa. Internal multi-rukoko dzakawanda itsva unodzivirira zvinhu, chakanakisisa dziviriro kuita;
Size: S, M, L, anokosha Numbers zvinogona customized.
Shandong Chen Lu zvokurapa chiridzwa co., LTD ari kambani kushandisa kugadzirwa X ranzi rwokudzivirira zvipfeko (vatungamirire rabha zvipfeko) akaitwa guru, kusanganisira itsva mhando X-ray unodzivirira zvipfeko akunda National patents, kambani zvakakwana zvinodiwa inogona vachawanei kutenga! Tapota kutirovera runhare mashoko!
Previous: Chen Lu itsva mhando mutobvu unodzivirira ruoko dziviriro ruoko
Next: The nyoro unodzivirira kutungamirira tangi rinorambidza kusakara
Tungamirira Clothes For X Ray Protection
Tungamirira Protective Series
Lead Rubber bhachi
Long ruoko kutungamirira jasi rimwe divi
Soft refu ruoko kutungamirira jasi